Iyo Deal iyo yakakwevera 'Halloween' nyeredzi Jamie Lee Curtis kudzokera kuHaddonfield
musha Horror Varaidzo Nhau Iyo Deal iyo yakakwevera 'Halloween' nyeredzi Jamie Lee Curtis kudzokera kuHaddonfield
by David Grove October 6, 2017
yakanyorwa na David Grove October 6, 2017
Jamie Lee Curtis ari kubhadharwa zvishoma, neHollywood zviyero, zvebasa rake pane iri kuuya Halloween firimu. Nekudaro, Curtis anomira kuti awane mamirioni kana iyo firimu iri bhokisi hofisi kubudirira.
Curtis ari kupihwa mari shoma pamubhadharo webasa rake pane iri kuuya Halloween firimu, mukutsinhana chidimbu chemubatsiro. Ichi chibvumirano chakafanana chekutora chikamu chekuti Blumhouse Productions, kambani iri kumashure kweiyo itsva firimu reHalloween, yakambopinda naEthan Hawke, nyeredzi yemafirimu akaburitswa naBlumhouse. The Purge uye Mutadzi. Parizvino, Hawke yakawana angangoita mamirioni gumi emadhora kubva The Purge uye Mutadzi, iyo yakawedzera madhora makumi mana nemasere emadhora makumi mana nemasere emadhora, zvichiteerana, kuhofisi yebhokisi repamba. Vera Farmiga naPatrick Wilson, nyeredzi dzisiri-Blumhouse-inogadzirwa Kutaura mafirimu, zvakare akakohwa mamirioni emadhora kubva parudzi urwu rwechibvumirano.
Kana iri kuuya Halloween firimu bhokisi hofisi kuita kwayakaita yakafanana neiyo The Kuchenesa uye Mutadzi kuhofisi yebhokisi repamba, Curtis aizowana mari inosvika mamirioni mashanu emadhora. Nekudaro, kana iyo bhaisikopo ichipfuura iyi modhi, nhamba yacho inogona kuswedera padhuze ne $ 5 miriyoni. "Kunyangwe iwe uchitenda kana kwete kuti Ethan Hawke inyenyeri, dhokisi rehofisi dhizaini, akaunza kutendeka ku The Purge uye Mutadzi, uye vakabudirira, ”rinodaro bhuku riri padhuze neiyo Halloween kugadzirwa. “Kunyangwe mafirimu anotyisa asiri mafirimu anotungamirwa nenyeredzi, zvinobatsira kuve nechiso chakavimbika, chinozivikanwa mufirimu, uye vanhu pavanofunga nezvazvo Halloween, uye nhoroondo yezvakateedzana, vanofunga nezvaJamie. Iye ndiye wekukweva kweiyo firimu nyowani, uye akakosha mari zhinji kune akateedzana, saka rudzi urwu rwechibvumirano runonzwisisika kune wese munhu anobatanidzwa. Ino chengetedza mabhajeti ari pasi pemamiriyoni gumi emadhora, uye inopa mubairo kubudirira, uye inokurudzira nyeredzi senge Jamie kusimudzira mafirimu zvakanyanya nekuti ivo vakapfuma kwazvo muchirongwa pamatanho ese. Mumhando inotyisa, Jamie inyanzvi uye acharamba akadaro. ”
Basa remufirimu raCurtis, sevamwe vazhinji vatambi vezera rake, rakadzikira zvakanyanya mumakore gumi apfuura. Yake yekupedzisira yakakunda yaive 2003's Freaky chishanu, iyo yaipfuura madhora zana mamirioni kuhofisi yebhokisi repamba. Munguva yekukwira kwebasa rake remufirimu, pakati pekupedzisira kwema100 nepakati pema1980, mutengo wekubvunza waCurtis waive pakati pe $ 1990 miriyoni ne2 mamirioni emadhora, saka chirongwa chakaita senge nyowani Halloween firimu rinomupa iro rakakura kwazvo zuva rekubhadhara muhupenyu hwake.
Curtis, uyo anoshandura makumi matanhatu nemusi waNovember 60, 22, ingangoita mwedzi mumwe mushure meanouya Halloween iyo firimu yakarongerwa kuburitswa kwemitambo, yakawana mari inokwana $ 8,000 muna 1978 yeiyo yekutanga Halloween firimu. Akabhadharwa $ 100,000 muma1981 Halloween II, uyo waive mubhadharo wepamusoro-soro Curtis waakawana panguva yake yekuchema mambokadzi, pakati pa1978 na1981. Seyeredzi uye asina-kudomwa Executive mugadziri wema1998's Halloween: H20, Curtis akawana mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora. Curtis akabhadharwa madhora mamiriyoni matatu pamadhora ake akawedzerwa muna 5 Halloween: Kumuka.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Curtis uye yake mhere mambokadzi basa, tarisa bhuku racho Jamie Lee Curtis: Chema Mambokadzi, iyo inowanikwa mu paperback uye kuburikidza nomumoto.
BlumhouseHalloweenhoraJamie Lee CurtisLaurie Stroderemakechema mambokadzidzakatevedzana
Pakati Pekupokana, Jeepers Vanonyangarika 3 Vachaita Mhepo paSyFy munaGumiguru
Spawn Reboot Inotanga Kutora Mafirimu Ekutanga Gore Rinotevera!